Shiinaha Customized Ragga boorsadaada maqaar-saareyaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Boorsooyin > Boorsada dhabarka shiraaca > Boorsada maqaarka ee ragga
Boorsada maqaarka ee ragga
(1) Dharka kore ee boorsada maqaarka ragga waxay ka samaysan tahay dharka PU ee la dhaqay. Maaddadani waxay leedahay xoog silig xoog leh iyo iska caabin abrasion ah, waxay si wax ku ool ah uga horjoogsan kartaa roobka qoynta bacda, waxay leedahay waxqabad wanaagsan oo aan biyuhu lahayn, waxayna leedahay iftiin sharaf leh. Waxqabadka biyuhu wuxuu gaari karaa: IPX3 ama IPX4. (2) Dahaarka gudaha wuxuu ka samaysan yahay 210D nylon Oxford maro, kaasoo leh muuqaal dhalaalaya. (3) Buuxinta gudaha waxay ka samaysan tahay suuf EPE oo laastik ah oo sarreeya. Qalabkani waa mid khafiif ah, u adkaysi u leh shoogga, oo si wax ku ool ah u ilaalin kara waxyaabaha bacda ku jira.
Boorsada maqaarka ragga
1. Boorsada maqaarka ragga product introduction:
(1) Dharka kore ee boorsada maqaarka ragga waxay ka samaysan tahay dharka PU ee la dhaqay. Maaddadani waxay leedahay xoog silig xoog leh iyo iska caabin abrasion ah, waxay si wax ku ool ah uga horjoogsan kartaa roobka qoynta bacda, waxay leedahay waxqabad wanaagsan oo aan biyuhu lahayn, waxayna leedahay iftiin sharaf leh. Waxqabadka biyuhu wuxuu gaari karaa: IPX3 ama IPX4.
(4) Jiinyeerka sheyga ayaa ah qaybta ugu muhiimsan. Tayada sheyga ayaa sifeynaya heerka sheyga, sidaa darteed boorsadeena kumbuyuutarka waxay isticmaashaa jiinyeerka YKK ee aadka loo yaqaan iyo sumcadda caanka ah ee Shiinaha ee SBS.
(5) Boorsadeena maqaar ee ragga waa mid u adkeysata xirnaansho, biyo la'aan iyo yareynta culeyska. Waxay qaadi kartaa laptop 17-inch ah iyo joornaalada A4, fayl, dalladaha, muraayadaha biyaha, iwm.
2. Xaddidyada alaabada (qeexitaannada) boorsada maqaarka ragga
Shaqada, safarka, safarka ganacsiga, wakhtiga firaaqada
Dhererka 28cmX Width 11cmX Dhererka 40cm
Oo ay ku jiraan kiniin, taleefanka gacanta, boorsada jeebka
3. Astaamaha iyo codsiyada boorsooyinka maqaarka ragga
(1) Boorsadan hal-garabka ah waxay leedahay astaamaha biyuhu, iftiiminta, nuugista shoogga, xirashada iska caabinta, nolosha muddada dheer, shaqeynta badan, iwm.
(2) Waxaad u isticmaali kartaa boorsadan laba-ka-mid ah si aad si fudud ugu kaydiso laptop-kaaga shaqada iyo kaabayaasha durugsan, sida kiiboodhka, jiirka, U diskka, moobilka moobaylka, iwm inta lagu jiro shaqada, safarka, safarka ganacsiga iyo xilliga firaaqada.
5. Xirxirida iyo rarka boorsada maqaarka ragga
(2) Cabbirka hal baako ee caadiga ah: 48cm X 34cm X 12cm, waxaan u habeyn karnaa cabirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 50cm X 36m X 60cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
(2) Waxaan kugula socodsiin doonaa horumarka wax soo saar ee alaabta dalabka waqtiga lagu jiro inta lagu gudajiro howsha wax soo saarka, si aad si dhaqso leh u fahmi karto heerka amarka.
(4) Si adag u xakamee tayada wax soo saarka oo kuugu soo gudbi adiga oo leh heerka dhaafitaanka 100%.
Jawaab: Waxaan nahay warshadda.
Jawaab: (1) Waqtiga dirista Muunadda: Kadib helitaanka amarka muunadda, bixinta saamiga waxay bilaabi doontaa tirinta. Muddada tijaabada ayaa qiyaastii ah 7 maalmood oo shaqo. Meelo kala duwan ayaa leh waqtiyo kala duwan oo rar iyo xilliyo kala duwan oo qaadashada shay-baarka. Shaybaarkayaga caadiga ah ayaa la raraa iyadoo la adeegsanayo UPS. Iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, shirkadda saadka ee aad sheegto ayaa laguu diyaarin karaa gaadiid.
(3) Wareegga gudbinta wax soosaarka ballaaran: Kadib helitaanka qandaraaska wax soosaarka ballaaran iyo bixinta hore, waqtiga ayaa bilaaban doona. Wareegga wax soo saarku wuxuu ku saabsan yahay 45 maalmood oo shaqo.
(1) Waan qiimeyn karnaa oo soo qaadan karnaa iyadoo ku saleysan sawirada, sawirada naqshadeynta (sawirada cad iyo sawirada 3D) ee aad adigu siiso, waxaanan ku siin karnaa xalal xirfadeed iyo wax soo saar badan.
Calaamadaha kulul: Boorsada maqaarka ragga, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka
Boorsada maqaarka dumarka
Shandad milatari oo hal-garab ah
Boorsada weelka wax lagu dhajiyay